Fanabezana sy fampianarana
Notolorana boky vaovao miisa 470 ny Bibliotheque monisipaly Toamasina
Isany tafididra tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ilay sambo LOGOS HOPE ny hanolotra boky ho an'ny trano famakiamboky monisipaly eto Toamasina.
Araka izany tonga nanatitra boky miisa 470 sy fanavaozana ireo toerana fametraham-boky ary ihany koa fanomezana solosaina iray hoentina anatsarana ny fomba fiasa, omaly, alatsinainy 18 janoary 2016 lasa. Efa amantaona maro no tsy nahitana fanatsarana ny trano famakiam-boky monisipaly eto Toamasina, io no nambaran'i Rtoa Brigitte, lehiben'ny sampandraharaha amin’ny Bibliotheque monisipaly. Nambarany tamin'ny fanokafana, tamin'ny fanavaozany ny tranom-boky dia manodidina ny 2500 Ariary isan-taona ny sara-pikambanana ao amin'ny trano famakiam-boky monisipaly. Azo ataon'ny mpimbana ihany koa mitondra boky 2 mody any an-trano ka averina afaka iray herinandro.
Zava-dehibe ny fanomezan-tanana nataon’ny LOGOS HOPE satria nanatsara indray ny fomba fiasan'izy ireo izany, hoy hatran’i Rtoa Brigitte. Nilaza koa ity tompon'andraikitra ity fa efa folo taona mahery izay dia tsy nisy fanatsarana ny trano famakiamboky monisipaly. Antenaina araka izany fa hampitombo fahalalana ny tanora indray ny fanatsarana ny trano famakiam-boky.
Isany nahagaga ny rehetra niatrika an'ity fanavaozana ny trano famakiam-boky ity ny tandrevaka ataon'ny mpitantana ao amin'ny fikarakarana ny lanonana nony tara loatra ny fahatongavan'ireo seza hipetran'ireo manampahefana. Eo ihany koa ny fako nivangongo nanakaiky ny toerana hanovana lanonana nefa efa fantatra nandritra ny 2 herin'andro ny fandraisana izao lanonana izao : fandrakofana ny fako, izay tsy nahatana ny fofona nanoto ny toerana anaovana ny lanonana no nantaon’ny mpanomana ny lanonana. Ny zava nisy nefa dia ny vahiny tonga nanolotra fanomezana ankafaliana ho an'ny zanaky ny Malagasy ka tsy fahavononona ny handray no niseho sy fofona maloto no nihiainana nandritran’ny lanonana.
(119) R. Prud'Homme : 19-01-2016 - 08:41